Tag: ecommerce kuvimba | Martech Zone
Maki: ecommerce kuvimba
Mukati memakore mashoma apfuura, maitiro ekutenga epamhepo akachinja zvakanyanya online. Kuva nenzvimbo yaunovimba nayo inoenderera iri nyaya yakakosheswa mukutengeserana uye nekudaro vatengi vaida kutenga kubva kune chete masaiti avanogona kuvimba nawo. Kuvimba uku kwakaratidzirwa kuburikidza nezvitupa zvechitatu bato, online ongororo, kana kunyangwe nzvimbo yemunharaunda yekutengesa. Sezvo kutengeserana kuri kuenderera mberi kuenda online, zvakadaro. 40% yevashandisi veInternet pasirese - vanopfuura bhiriyoni vashandisi - vaita a